दयाहाङकी गायिका पत्नी बेनुकाले खोलिन ‘राज’ - Dainik Nepal
दयाहाङकी गायिका पत्नी बेनुकाले खोलिन ‘राज’
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २० गते ११:००
बेनुका राई, गायिका
काठमाडौं । बेनुका राई गीत संगीतमा लागेको दश वर्ष भैसक्यो । गायनको शुरुवात उनले सुगम संगीतबाट गरिन् । बेनुकाको परिचय गायिका मात्रै सीमिति छैनन् । उनी नेपाली फिल्मका चर्चित अभिनेता दयाहाङ राईकी पत्नी पनि हुन् । गायिकाको परिचय हुँदा हुँदै बेनुकालाई दयाहाङकी पत्नी भनेर धेरैले चिन्छन् । भन्छिन्, ‘मेरो आफ्नो मात्रै परिचय मात्रै छैन । आजकाल त मलाई ‘दयाहाङकी पत्नी’ भनेर नामै राखिदिइसकेका छन् ।’ पतिको नामबाट चिनिदा बेनुकालाई पनि खुसी लाग्दो रहेछ ।
गायन क्षेत्रमा दयाहाङले तपाईलाई असहयोग गर्नु हुन्छ रे हो र ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘कति नचाहिने कुरा भनेको होला । मलाई बेनुका भन्दा पनि दयाहाङकी पत्नी भनेर चिन्छन् । उहाँकै सहयोगले गीत संगीतमा लागेकी छु ।’ दयाहाङले बेनुकालाई गीत गाउनका लागि चिनजानका साथीहरूसँग गीत माग्दैनन् । ‘दयाहाङ मेरो पति हो । तर, उहाँले मलाई एउटा गीत पनि माग्नु भएको छैन । आफ्नै क्षमताले काम गर भन्नु हुन्छ’, बेनुकाले भनिन्, ‘उहाँ यति नाम चलेको कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँले खेलेका कुनै पनि फिल्ममा गीत गाएको छैन । सिफारिस गरेको भए धेरै गीत गाउन पाउँथे होला ! उहाँले सिफारिस गर्नु हुँदैन ।’
श्रवण मुकारुङ्ले लेखेको ‘कहाँ कहाँ पुगिन म तिम्रो लागि गीत खोजी…’ बोलको गीत पहिलो पटक गाएकी थिइन् । त्यस बेला उनले एल्वम पनि निकालेकी थिइन् ।
बेनुकाले एसएलसीसम्मको शिक्षा मोरङमा लिएकी हुन् । उच्च शिक्षा लिने क्रममा संगीत विषय लिएर पढेकी हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ललितकलाबाट ‘एमम्युज’ अध्ययन गरेकी छिन् । भन्छिन्, ‘ललितकला क्याम्पसबाट ‘एमम्युज’ अध्ययन गरेकी छु ।’ पढाइ मात्रै गर्नुभयो कि प्रयोगात्मक गर्नु भएको छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘ललितकला क्याम्पसमा सबै हुन्छ ।’ बेनुकाले ‘एमम्युज’ सकेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । घरपरिवार र आफ्नो जागिरका कारण गीत संगीतमा धेरै समय दिन नसकेको उनले स्वीकारिन् ।
छोरो जन्मिएका बेला बेनुकाले करीव ४–५ वर्ष गीत संगीतबाट धेरै टाढा बस्नु पर्‍यो । अहिले भने बेनुकाले गायनलाई निरन्तरता दिएकी छिन् । भन्छिन्, ‘गीततिर पनि समय दिन्छु ।’ अभिनेता दयाहाङसँग पहिलो पटक काठमाडौंको बागबजारमा भेट भएको थियो । पहिलो भेटमा नै उनीहरूबीच माया परितीले गुँड लगाएको रहेछ । त्यस बेलाको कुरा स्मरण गर्दै बेनुकाले भनिन्, ‘मैले गीत गाउन थालिसकेको थिएँ । उहाँले अभिनय सिक्दै हुनुहुन्थ्यो । भेट भयो । माया बस्यो ।’ शुरुवातका दिनमा मायाप्रेम बसे पनि बेनुका र दयाहाङबीच ०६५ सालमा मागेर विवाह भएको थियो ।
दयाहाङले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबाट बेनुका खुसी छिन् । भन्छिन्, ‘आफ्नो पतिले गरेको राम्रो काम र प्रशंसा सुन्न पाउँदा को पत्नी खुसी हुँदैनन् होला र ? मपनि खुसी छु ।’ घरको कामका साथै गीत संगीत र ललितपुरको झम्सीखेलस्थित डिएभी स्कूलमा म्युजिकको अध्यापन गराउनु बेनुको दैनिकी बनिसकेको छ । दयाहाङ, छोरो र घरपरिवारको रेखदेख बेनुकाले नै गछिन् । भन्छिन्, ‘घर परिवारले पनि साथ दिनुभएको छ । त्यही भएर मलाई सहयोग भएको छ ।’
बेनुकाको माइती र घर दुबैतिर गीत संगीतमा लागेका कोही पनि छैनन् । तैपनि उनी भने गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरिन् । सबैको सहयोग भयो । राम्रो गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सानैदेखि गीत संगीतमा लाग्ने उनको चाहना होइन । उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं आएका बेला साथीहरूको लहैलहमा लागेर ललितकला क्याम्पसमा भर्ना भएकी थिइन् ।
बेनुकाले अहिलेसम्म ६०–७० वटा गीतमा स्वर दिएकी छिन् । फिल्महरूमा उनको स्वर सुन्न पाइएको छैन । बेनुकाले स्वर दिएको फिल्म ‘प्रेमनाथ’ सम्पादनमा छ । भुपु पाण्डे र बेनुकाको स्वर रहेको यो गीतबाट उनले राम्रो अपेक्षा लिएकी छिन् ।
बेनुकालाई श्रवण मुकारुङका शब्द र लेखन मन पर्छ । संगीतकारमा हरि लम्सालका संगीत बेनुकाले मन पराउँछिन् । लोक तथा दोहोरी गीतमा उनको स्वर छैन । तर, पूर्वेली भाकाको गीत गाउने भने मन बेनुकालाई छ ।
दयाहाङको खानपिन र रहनसहनका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा गायिका बेनुकाले भनिनन्, ‘दायाहाङलाई खासै यही मन पर्छ भन्ने छैन । साधारण खाना खानु हुन्छ । दाल, भात, मासु मन पराउनु हुन्छ । काम नभएको बेला अलिक धेरै सुत्नु हुन्छ ।’ शुरुवाती दिनमा दयाहाङले घरमा खाना पकाउनु हुन्थ्यो । कामको व्यस्तताले गर्दा आजकाल घरमा चिया पनि पकाउनु हुन्न’, उनले भनिन् ।